War Deg Deg ah Howl Galo ay ka qeyb qaadanayaan Diyaarado Helicobter ah oo saaka kasocda Qeybo Muqdisho kamid ah. | Salaan Media
War Deg Deg ah Howl Galo ay ka qeyb qaadanayaan Diyaarado Helicobter ah oo saaka kasocda Qeybo Muqdisho kamid ah.
War Deg Deg AH Howl Galo ee ka qeyb qaadanayaan Diyaarado Helicobter ah oo saaka kasocda Qeybo Muqdisho kamid ah
Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowlada Somalia ayaa saaka howlgal xoog badan oo ka duwan kuwii hore waxay ka wadaan XaafadaXamar jadiid oo ka tirsan degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir.
Howlgalkan oo sidoo kale ay ka qeyb qaadanayaan ciidamada nabad sugida ayaa dadweynaha ku dhaqan xaafada Xamar jadiid waxay sheegeen in saaka waaberigii ay ku soo tooseen ciidamo ka tirsan AMISOM iyo dowlada oo xaafadooda jid jid u taagan.
“Mar aan isku dayey inaan dibeda u soo baxo suuqana adeeg u doonto waxay igu amreen inaan dib u laabto guriga illaa amar dambe” ayey yiri hooyo magaceeda ku soo gaabisay Xaliimo oo ka mid ah dadka degaanka.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay guri guri u galayaan xaafadaha Xamar jadiid, iyadoo wararkuna sheegayaan in howlgalkan lagu baadi goobayo hogaamiyeyaal iyo saraakiil ka tirsan Al-shabaab oo dib ugu soo laabtay Muqdisho, laguna tuhunsan yahay iney xaafadaas ka wadaan abaabulka weeraro hubeysan.
Dadka Xaafada Xamar jadiid ayaa sheegaya iney arkayaan dayuurad dagaal nooca qumaatiga u kaca ee Helicoberka loo yaqaano oo xaafadahaas dulmareysa iyagoo dusha ka ilaalinaya ciidamada howlgalkaas ka qeyb qaadanaya oo illaa hadda aan la ogeyn waxa ay soo qabteen, faahfaahina ka bixin howlgalka.
Howlgalkan ayaa noqonayaa kii ugu balaarnaa ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Somalia ka sameeyaan xaafada Xamar jadiid tan iyo markii degaanadaas ay kala wareegeen xoogaga Al-shabaab labo sano ka hor.